Radio Don Bosco - Hafaliana miaraka amin'i Don Bosco
Tamin-kafaliana sy amim-parahalahiana no nandraisana sy nankalazanay ny taona vaovao tany amin'ny ankohonam-piainainana nisy anay avy. Efa manomboka tsara ny taona ny vaovao. Samy nahazo ny tetiandrony ny sampan'asa tsirairay. Nisy ihany koa rahalahy nandao ity tany ity, hihazo ny paradisa.
Voaravaka hetsika samihafa ny volana janoary satria volan'ny fety ho antsika salezianin'i Don Bosco. Nomarihana tamin'ny fialamboly sy fanatanjahan-tena ny tapakandro tamin'ny fetin'ny olomasina mpiaro antsika, François de Sales. Hetsika notanterahina tao amin'ny ankohonam-piainan'ireo mpandalina teolojia, izay nandraisan'ny ankohonam-piainana rehetra anjara: "Pré-noviciat", "Post-noviciat", "Théologat", "Cresco", "stagiaires". Nankalazaina manetriketrika amim-pahamendrehana ihany koa ny fetin'i Md Don Bosco, mpanorina sy raintsika. Maro ny hetsika nokarakarain'ireo sampan'asa sy sehatra isaky ny ankohonam-piainana: kolejy Don Bosco, paroasy, oratorio. nandray anajara avokoa ny rehetra tamin'ireo hetsika ireo.
Eo am-pianadrasana ny vaovao manaraka, , "mirary taona 2020 mahafinaritra ho ampoky ny fahasambarana" ho anareo rehetra.